Vantany vao niala ireo mpankafy ny karipetra mena tamin'ny lalao baolina Ball Institute, toy ny androany ny tambajotra dia efa nanana sary avy amin'ny hetsika vaovao. Ny andro iray tany Cannes dia nandao ny fetiben'ny sarimihetsika, izay nanatrehan'ireo olo-malaza marobe. Omaly teo amin'ny karipetra mena teo anoloan'ny sehatra dia nametraka sarimihetsika malaza toy ny Julianne Moore, Keith Blanchett, Kristen Stewart ary ny maro hafa. Momba ireo hatsarana ireo, na ny momba ny akanjo ataon'izy ireo, ankehitriny dia hiresaka.
Ireo kintana amin'ny efijery dia nisafidy akanjo mainty
Tsy toy ny akanjo ao amin'ny Costume Institute Costume Institute, ny Festival Festival Cannes dia manome akanjo iray izay mikendry ny hiseho amin'ny fitafiana voadio sy voatandrina. Izany no antony mahatonga ny mpijery tsy hahita vato maromaro ahitana akanjo marevaka, ary ny firavaka madinidinika sasany amin'ny karipetra mena amin'io hetsika io. Ilay voalohany tiako holazaina dia ilay mpilalao sarimihetsika Penelope Cruz, izay nanao akanjo mainty avy amin'ny marika Givenchy Couture. Ny vokatra dia manana takaitra roa tonta misy tavy sy guipure, izay voaravaka amin'ny volom-borona. Raha miresaka momba ny endriky ny akanjo, dia indro i Cruz nampiseho kofehy lava lavalava amin'ny lamosina kely sy kofehy lava iray misy fiarandalamby notsongaina avy amin'ny tsangambato marobe. Raha ny momba ny volo sy ny makia, dia nanapa-kevitra i Penelope fa hanao loko mihodina amin'ny maso ary mifantoka amin'ny volo ny volo. Ny hany "manasongadina" ny sarin'ilay sarivongana dia ireo kavina lavalava lavalava avy amin'i Swarovski, izay nisy ny vatom-borona lehibe indrindra.
Cruz amin'ny akanjo mainty avy amin'ny marika Givenchy Couture
Nifidy kitapo mainty koa i Cate Blanchett, 48 taona. Tamin'ny fisokafan'ny fetiben'ny sarimihetsika Cannes, ny mpilalao sarimihetsika dia niseho tao anaty akanjo avy amin'ny lamaody armani, izay ahafahany mahita azy amin'ny taona 2014. Ny vokatra dia teboka roa ary nisy ny tapa-doko, izay teo ambonin'izany no nametraka kofehy mena. Ny akanjo dia manana satroka mifanongana ary akanjo lava lava lava. Ny "fanasongadinana" ny vokatra dia varavarana misokatra, izay nahafahan'ny rehetra nankafy ny vatana tsara tarehin'i Blanchett. Ho an'ity toerana tsara tarehy ity dia nanao saron-tsofina marevaka avy amin'ny marika Chopard i Kate, nanisy volom-borona tsy tambo isaina, ary nanamboatra ny lokony tamin'ny loko voajanahary.
Kate ao amin'ny akanjo avy amin'ny trano fanao lamaody Armani
Mpisera hafa an'ny sarimihetsika sinema amerikana Kristen Stewart nivoaka tao anaty karipetra tamin'ny akanjo mainty avy amin'ny marika Chanel. Tsy toy ny akanjo 2 teo aloha, ny vokatra Kristen dia nanana halava fohy ary natao tamin'ny chiffon sy ny loko mainty, izay nahafinaritra ny nanoratana ny bodice sy ny akanjon'ilay akanjo. Ho azy dia nanao kapa mainty hoditra mainty i Stewart, nanamboatra volom-borona tsy dia mahazatra ary manamboatra fotsy mainty sy manga ao anaty haizina.
Kristen ao amin'ny akanjo avy amin'ny marika Chanel
Kate Blanchett dia niresaka momba ny feminisme sy ny toetrany amin'i Harvey Weinstein
Ny akanjo mena koa dia tamin'ny fotoana
Ankoatra ny akanjo mainty, mpilalao sarimihetsika fanta-daza dia naneho vokatra tamin'ny loko hafa - ireo akanjo marevaka mena. Ny voalohany tamin'ny akanjo toy ny mpanao gazety dia niseho tamin'ny mpilalao sarimihetsika Julianne Moore. Tamin'ny kintanin'ny sarimihetsika 57 taona, afaka nahita vokatra avy amin'ny Givenchy Couture ianao, izay manana silhoueta mivantana, seza goavambe ety sy kapa miloko volom-borona. Ho an'ity, niaraka tamin'i Julianna dia nanao kapa mena teo amin'ny sehatra sy kiraro avo ary longo kavina marika Chopard. Raha ny horita sy ny tarehy, ny mpilalao sarimihetsika iray dia nahita tavy lehibe teo amin'ny lohany, ary mamirapiratra mamirapiratra amin'ny lantom-peo mena sy ejlina mainty eo amin'ny tarehiny.
Moore amin'ny akanjo nanaovan'ny Couture
Mpilalao sarimihetsika iray hafa, izay nandoto akanjo mena, dia Aria Albert Hargate. Ny vehivavy dia mitafy akanjo maingoka amin'ny kofehy miaraka amin'ny bodiska mahaliana sy ny zipo-bolo lava lava sy ny fery eo amin'ny sisiny. Ity akanjo ity dia nasiana akanjom-boninahitra iray, izay nalaina tamin'ny kiraro tsara tarehy. Ankoatra ny akanjo mampitolagaga dia nasehon'i Arai ny kavin'olom-bolo vita amin'ny metaly fotsy, sy ny boribory mitovy, ny peratra. Raha momba ny volo, dia nasehon'ilay mpilalao sarimihetsika, nampidiriny am-paty. Ny demokrasia dia tena demaokratika ary nanasongadina ny hatsaran-tarehin'i Hargate.
Victoria Beckham dia nanapaka ny trano fisakafoanana ary nanova ny lokon'ny volony
Jim Carrey: lasa adala ve ilay mpilalao na nampiasaina tamin'ny endrika vaovao?
Tara Reed dia nanafintohina ny hoditra mangatsiaka sy ny fingododododo tamin'ny vahiny tamin'ny Halloween
Karolina Kurkova modelin'i Czech dia nampiseho ny sarin'ny zanany faralahy
Reese Witherspoon sy Ryan Philippe
Natalie Portman amin'ny maha-Zaza
Saripikan'i erotic photos of daughter Bono ao amin'ny gazetiboky GQ
Jamba amin'ny tanana manokana
Ny sakafo ho an'ny reny manan-janaka mandritra ny herinandro
National Theater Bunraku
Echinacea - fambolena sy fiahiana
Demodecose amin'ny olona - fitsaboana
Fitandremana ho an'ny vehivavy bevohoka
Yoga ao amin'ny hammocks - ny soa sy ny fanoherana ny yoga fly
Karazana karazana voankazo tsara kokoa ho an'ny sakafo voalohany?
Ny ra ao amin'ny urine miaraka amin'ny cystitis
Fangataham-bolo amin'ny fomba amin'ny lofty amin'ny tananao manokana
Gardnerella - soritr'aretina
Fangatahan'ireo Aquarium - fitsipika fototra momba ny fikarakarana sy ny fikojakojana
Sakafo ao anaty ala - 7 andro
Pita mofo misy tsiro ao anaty lafaoro
Berry Blueberry - mahasoa